Kutenderera: ichivimbiso chikumbiro kubva kune yemitambo nyika | Linux Vakapindwa muropa
Kana ndikakuudza izvozvo Kuchinja mutambo wevhidhiyo wepfuti-iwo waungafunge… Mumwezve! Kune atove mazhinji mazita eiyi genre, asi ichokwadi kuti kune vazhinji vanoda mafuri uye vanowanzo kuve vanobudirira chaizvo, iwe unofanira kungoona zvakaitika naFortite. Asi ndizvo chaizvo zita rimwechetero iro rakawana mukurumbira kune zvimwe zvitsva zvainopa zvichienzaniswa nemamwe mitambo yemavhidhiyo yakafanana uye ndizvo zvakakwezva vatambi.
Asi Rotation zvakare imwe yeaya kupfura mitambo yemavhidhiyo ine chimwe chinhu chekupa. Asi kwechinguvana isu tinofanirwa kugutsikana neruzivo rwuri kuuya kwatiri, uye tomirira kusvikira rwagadzirira. Chatinoziva ndechekuti ichave ichiuya kuLinux, iri inhau dzakanaka. Iye zvino unogona kuwana rumwe ruzivo pane peji chiutsi nezve zita iri. Chichava mupfuti akatakurwa nezviito uye kufamba, achiwedzera mamwe masanganiswa sezvatinokuratidza pazasi ...
Musiyano mukuru, kana kuti zvirinani, izvo Rotate inofanirwa kuunza kune iyo shooter genre, ndeyekuti iwe unotamba pamepu emepu, ndokuti, nyika diki dzino tenderera paunenge uchifamba pamusoro apo uchipfura uye uchiita chero zvinotora kuti urarame. Ndo izvo zvinosiyanisa uyu mutsva shooter kubva kune vamwe vese, ayo anowanzo fanika zvakafanana. Paunoona iyo mifananidzo, inoyeuchidza zvishoma nezveMudiki Muchinda, kana kunyange iwo aunofarira Dhiragoni Bhora kune iyo nyika yeKaito. Chokwadi?
Unofarira pfungwa yacho here? Ichokwadi ndechekuti haina kufungidzirwa zvakaipa. Munyaya iyi uri nyeredzi nepfuti iyo ichafamba kuburikidza nemapuraneti akasiyana ekupedzisa nayo mafungu ezvisikwa zvevatorwa. Haufanire kungopfura chete, asi zvakare tsvaga uye utore zvinhu zvinogona kubatsira kune mamwe mamishini, wedzera simba rako, chengetedza zviwanikwa, nezvimwe. Uye iwe unofanirwa kukurumidza, nekuti nekufamba kwenguva zvinowedzera kuoma.
Pindai hunhu Zvinonyanya kuzivikanwa ndezvekuti:
20 mhando dzevavengi vatorwa vane hunyanzvi izvo zvinoita kuti zviwedzere kuomarara
Mhando gumi nembiri dzepfuti
Unyanzvi sekuporeswa, misungo, turrets
Midziyo yakadai seheti, mabhegi, zvombo zvemuviri
La zuva rekuburitsa hazvizivikanwe, asi richava gore rino kana pamwe kutanga kwegore rinouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kutenderera: ichivimbiso chikumbiro kubva kune yemitambo nyika
RawTherapee 5.6 inouya nepseudo-HiDPI rutsigiro uye nezvimwe